Global Voices teny Malagasy » Mpiady amin’ny Kolikoly Voafelaky ny Fiampangàna Ho Nanao Kolikoly Any Azia Afovoany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2017 3:55 GMT 1	 · Mpanoratra Akhal-Tech Collective, Salam Aleik Nandika Tantely
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tajikistan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Sary ambany fahazoandàlana creative commons. 
Miaina firongatr'ireo tranganà ady amin'ny kolikoly i Azia Afovoany, iray amin'ireo faritra be kolikoly indrindra eto an-tany, miaraka amin'ireo tomponandraikitry ny ady amin'ny kolikoly mizaka ny vokatr'ireo fanadihadiana.
Taminà hetsika iray tsy nanam-paharoa natao tamin'ny faran'ny volana lasa teo, nanodidina ny 20 isa ireo tomponandraikitra antenantenany sy ambony ao amin'ilay Masoivoho matanjaka Iadiana amin'ny Kolikoly sy ny Fanarahamaso ny Ara-bola nogadraina tany Tajikistan. Tany Turkmenistan, herinandro vitsivitsy taty aoriana, nosamborina ny mpampanoa lalànam-panjakana sy ireo mpiasa am-polony eo ambany fifehezany, raha ny zavatra hita, noho ny nahalatsaka azy ireo tanatin'ny karazan-keloka  tokony nanaovany fanadihadiana.
Any Tajikistan, hita tamin'ny fikarohana ny fananan'ny iray tamin'ireo mpigadra, izay mpanao fanadihadiana antenantenany, ny vola mitentina 1,3 tapitrisa dolara, ny volamena enina kilao, ireo efitrano miisa 31 any Dushanbe, ireo trano roa misy tokotany, ny datcha any Varzob (toerana miendrika morontsiraka manakaiky ny renivohitra), ny trano iray hafa any Aotrisy, ireo karatra fampiasa amin'ny banky ao an-toerana sy any ivelany, ary farafahakeliny akanjo mihaja lafo vidy miisa 50, araka  ny voalazan'ny gazety Akhbor.com any Prague miaraka amin'ireo loharano ao anatin'ny firenena.
Tsy hiavaka ny karazanà kolikoly miafina toy izany — raha nisy loharano ireo tatitra izay tsy nohamarinin'ny gazetim-panjakana Tajik. Fa dia ho fisehon-javatra fahita aminà firenena iray aza izany, izay tsy mihoatra ny 250 dolara isam-bolana ny karama antonony ao amin'ny renivohitra , ary milahatra any amin'ny laharana faha-151 amin'ny Tondron'ny Fahitàna Kolikoly avoakan'ny Transparency International. 
Any amin'ny laharana faha-154  amin'io tondro io i Turkmenistan, firenena iray Sovietika taloha. Nisy tsaho mandeha mikasika ireo firenena roa ireo, fa satria midina ny ‘felaka’ ara-toekarena, noho ny fitotonganana ara-toekarena any Rosia sy ny fidinan'ny vidin'ny molanga (hydrocarbure), niha-mafana ny ady eo amin'ireo samy ao an-tampony ao. Noho izany, mandehandeha ny tohankevitra, tsy misy idiran'ny ady amin'ny kolikoly loatra.
Taminà tatitra an-dahatsary YouTube momba ny fisamborana sy fanamelohana ireo Turkmen (eto ambany), izay navoakan'ny gazety iray mpanohitra ary manasongadina ny lahatsary avy amin'ny fahitalavi-panjakana faran'izay tena voaaramaso be ao Turkmenistan, naka ity lohahevitra  ity taminà hiakam-pamoizam-po mampivarahontsana mahalaza azy tsara ilay mpampiasa YouTube, Rosa Ekacheva :
Lò efa hatry ny ela ny zavatra rehetra. Tsy misy azo avotana intsony!
Ireo “adim-poko” ao Tajikistan
Ho an'ny Tajikistan, ny tena mahavariana indrindra amin'ireo tsaho maro mifandray amin'ireo fisamborana vao haingana dia misyifandraisany amin'i Rustam, zanak'i Emomali Rakhmon, ilay mpitarika am-perinasa, .
Araka io tsaho io, ireo tomponandraiki-panjakana misahana ny ady amin'ny kolikoly dia nokendrena hampihenana ny herin'i Rustam izay efa teo amin'ny sampan-draharaha nanomboka ny volana Janoary 2017, tamin'izy notendrena ho ben'ny tanànan'i Dushanbe.
Araka ny mpanoratry  ny sampana mifantoka amin'ny vaovaon'i Tajikistan, Ozodagon, notanisain'ny mpampiely vaovaomparitra iray hafa, centre1.com, mety niteraka fialonana teo amin'ireo sampam-piarovana hafa ireo fahefana midadasika be ananan'ny sampana miady amin'ny kolikoly — indrindra ilay mahery mpandimby ny KGB — ka nanao izay rehetra vitany hanoherana azy io.
Mety hoe misy te-hanimba ny toeran'i Rustam Emomali, izay zatra nitantana io sampana io. Teo alohany, i Abdufattoh Goib no nitantana io sampan-draharaha io. Namana akaikin'i Rustam ny zanany lahy, tompon'ny kliobam-panatanjahan-tena Istiklol.
Eurasianet-n'ny bilaogy In the Cocoon, nikaroka lalindalina kokoa ny ‘adin'ny antoko’ , raha sady nampitandrina ihany tamin'ireo fisintonana tsoa-kevitra matotra:
Zava-dehibe ny manamarika fa, ny fanadiovana ny ady amin'ny kolikoly, dia asan'ny Kaomiti-panjakana an'ny Fiarovam-pirenena, na GKNB, izay mitovy amin'ny tranga fahita fiadiana amin'ny antokontoko.
Nalaina indrindra indrindra avy tamin'ny faritra manodidina ny atsimon'ny tanànan'i Kilob ny mpitondra eo am-perinasa ankehitriny, fa ampahan'ny kisarisary lehibe ihany io, ary misy kodiarana anaty kodiarana mila jerena ao.
Mba hitsofohan'i [Rustam] eo amin'ny sezan'ny ben'ny tanàna ny fiantombohan'ny taona, nilaina ny namindra ny tompon-toerana teo aloha sady efa teo hatry ny ela, Mahmadsaid Ubaidulloev, mpampiranty fototry ny antoko Farkhor. Tsy vitan'ny maka ny asan'i Ubaidulloev fotsiny, nampitombo ny elanelana i Emomali tamin'ny fanaovana ireo fizotra rehetra amin'ny fanadihadiana ilay ben'ny tanàna teo aloha hampisehoana ny porofon'ny fanaovany kolikoly nandritra ny naha teo amin'ny toerany azy.
Raha toa ny ekipan'i Farkhor sy ny antoko Dangara-n'ny fianakaviana Rahmon hita ho samy mifanila ihany, tsy voatery hitovy làlan-kaleha foana akory izy ireo.
Ary satria niseho tokoa izany, koa samy teraky ny distrikan'i Farkhor ny sefon'ny GKNB, Saymumin Yatimov, mitovy amin'i Ubaidulloev ; hany ka mety ho fanehoany ny lojikan'ny tsy fivadihana amin'ny samy mitovy faritra ny zotom-pony tampoka ny hiaraka ny mpiara-miasa taloha tamin'i Emomali.
Amin'izao fotoana mbola manjavozavo izao aloha, resaka be ihany ary tokony hitandremana tsara ny misintona tsoa-kevitra avy amin'ny eritreretina ho fifanarahan'ny antoko. Raha toa ka misy fe-potoana ihany io fomba fiasainana io, ho hita eo amin'ny ho avin'i Ubaidulloev amin'ny farany izany.
Mazava ho azy, noho ny fiaretany hatry ny ela, rikoriko tamin'ireo zava-mitranga ireo olompirenena tsotran'i Tajikistan, mbola maneho indray ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny tombontsoany sy ny an'ireo tomponandraiki-panjakana ambonin'ny governemanta izany.
Nitaraina izao  ny mpampiasa Facebook Tikhufa Akhmedova :
Io vinanton'io olona io, io zanaka lahin'io olona io, io rahalahan'io olona io, io zanaky ny mpiray tampo amin'io olona io… Mahazo ireo toerany noho ny lafiny fihavanany amin'ireo olona manampahefana fotsiny ve ireo olona tra-kolikoly be ireo? […] Firifiry moa ireo olona nandrato fahaizana tsara tsy mety mahita asa ary voatery miala ny firenena satria tsy manana dadatoa manampahefana?
Natsangana ny taona 2005 ny Masoivoho amin'ny Fanaraha-maso ny Ara-bola sy ny Fiadiana ny Kolikoly-n'ny Repoblikan'i Tajikistan, mba hiady ny kolikoly eo amin'ny firenena, fa tonga dia nantsoin'ireo Tajiks naneso ho toy “ny Masoivohon'ny Kolikoly” teo ho eo.
Ny taona 2015, raha nanamarika ny faha folo taonan'ny masoivoho, nitsikera ny asany  ary nampitahotra ny hanakatona an'io ny Filoha Rakhmon, nilaza hoe: “nanangana io masoivoho io aho, hanimba an'io ihany koa aho”. Fotoana fohy taorian'izany, notondroiny hitantana sy hanaramaso io ny zanany lahy sady mpandova azy, Rustam.
Nanao soso-kevitra amin'ny fomba tena hamongorana ny kolikolyo any amin'ny firenena mahantra ilay mpanao gazety Tajik lasa sesin-tany, Temur Varqi.
Manao soso-kevitra aho ny hamoronan'ny mpitondra Tajik, Masoivoho Fiadiana ny Kolikoly eo ambanin'ny Masoivoho Fiadiana ny Kolikoly, mba hiady amin'ny kolikoly ao amin'ny Masoivoho Fiadiana ny Kolikoly.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/29/100570/
 Sary ambany fahazoandàlana creative commons.: http://www.picserver.org/images/highway/phrases/corruption.jpg
 raha ny zavatra hita, noho ny nahalatsaka azy ireo tanatin'ny karazan-keloka: http://www.eurasianet.org/node/83656
 ny karama antonony ao amin'ny renivohitra: http://economicsandwe.com/7475EDD6F1FB1BC6/
 any amin'ny laharana faha-151 amin'ny Tondron'ny Fahitàna Kolikoly avoakan'ny Transparency International.: https://www.transparency.org/country/TJK
 naka ity lohahevitra: https://www.youtube.com/watch?v=ppaWfb_A1og&lc=z13hipww3we4thfez23pjh24vmvjztnst
 Araka ny mpanoratry: https://centre1.com/tajikistan/chto-stoit-za-delom-tadzhikskih-antikorruptsionerov/
 nikaroka lalindalina kokoa ny ‘adin'ny antoko’: http://www.eurasianet.org/node/83691
 Nitaraina izao: https://www.facebook.com/groups/1850530778525172/permalink/1932393637005552/?comment_id=1932425733669009&comment_tracking=%7b%22tn%22%3A%22R2%22%7d
 nitsikera ny asany: https://www.ozodi.org/a/reshuffle-in-law-enforcement-block-of-tjk-govt/26870282.html
 Nanao soso-kevitra : https://www.facebook.com/temur.varki/posts/10212085394557705?pnref=story